7 Izvi ndizvo zvandakaoneswa naChangamire Ishe Jehovha, uye tarira! akanga achiita kuti pave nebute remhashu pakutanga kwokumera kwezvakanga zvapedzisira kudyarwa.+ Uye tarira! ndizvo zvakanga zvapedzisira kudyarwa pashure pokunge uswa hwamambo hwachekwa. 2 Zvino parakanga rapedza kudya zvinomera panyika, ndakabva ndati: “Haiwa Changamire Ishe Jehovha, ndapota, kanganwirai.+ Pavanhu vaJakobho ndiani achasimuka? Nokuti iye muduku!”+ 3 Jehovha akazvidemba pamusoro peizvi.+ “Hazvizoitiki,” Jehovha akadaro. 4 Izvi ndizvo zvandakaoneswa naChangamire Ishe Jehovha, uye tarira! Changamire Ishe Jehovha akanga achishevedzera kuti pave nokukakavara achishandisa moto;+ uye iwo wakaomesa mvura yakadzika, ukaparadza chikamu chomunda. 5 Ndakabva ndati: “Haiwa Changamire Ishe Jehovha, ndapota, regai henyu.+ Pavanhu vaJakobho ndiani achasimuka? Nokuti iye muduku!”+ 6 Jehovha akazvidemba pamusoro peizvi.+ “Izvozvowo hazvizoitiki,” Changamire Ishe Jehovha akadaro. 7 Izvi ndizvo zvaakandionesa, uye tarira! Jehovha akanga akamira parusvingo rwakagadzirwa pachishandiswa tambo yokuyeresa,+ uye aiva netambo yokuyeresa muruoko rwake. 8 Jehovha akabva ati kwandiri: “Amosi, uri kuonei?” Naizvozvo ndakati: “Tambo yokuyeresa.” Jehovha akatizve: “Tarira ndiri kuisa tambo yokuyeresa pakati pevanhu vangu vaIsraeri.+ Handizovaregererizve.+ 9 Nzvimbo dzakakwirira dzaIsaka+ dzichaitwa matongo, uye nzvimbo tsvene+ dzaIsraeri dzichaparadzwa;+ uye ndichamukira imba yaJerobhoamu nebakatwa.”+ 10 Zvino Amaziya mupristi wokuBheteri+ akatumira shoko kuna Jerobhoamu+ mambo waIsraeri, achiti: “Amosi akumukirai ari muimba yaIsraeri.+ Nyika haichagoni kushivirira mashoko ake ose.+ 11 Nokuti zvanzi naAmosi, ‘Jerobhoamu achaurayiwa nebakatwa; uye chokwadi Israeri achatapwa achibva panyika yake.’”+ 12 Zvino Amaziya akati kuna Amosi: “Haiwa iwe muoni,+ enda, tizira kunyika yaJudha, udye zvokudya ikoko, uye uprofitire ikoko. 13 Asi usaprofitazve+ uri muBheteri, nokuti inzvimbo tsvene yamambo+ uye iimba youmambo.” 14 Amosi akabva apindura Amaziya, akati: “Ndakanga ndisiri muprofita, uye ndakanga ndisiri mwanakomana womuprofita;+ asi ndaiva mufudzi+ nomunhu aibaya maonde emitsamvi. 15 Jehovha akanditora kuti ndirege kutarisira makwai, Jehovha akati kwandiri, ‘Enda uprofite kuvanhu vangu vaIsraeri.’+ 16 Zvino chinzwa shoko raJehovha rokuti, ‘Uri kuti here: “Usaprofitira Israeri,+ uye usataurira shoko+ imba yaIsaka”? 17 Naizvozvo zvanzi naJehovha: “Mudzimai wako, achava pfambi muguta.+ Vanakomana vako nevanasikana vako, vachaurayiwa nebakatwa. Nyika yako ichakamurwa pachishandiswa tambo yokuyeresa, yogovewa. Iwe pachako, uchafira panyika isina kuchena;+ uye Israeri, achatapwa achibva panyika yake.”’”+